Umaki: ukwakhiwa kwekhasi lokufika | Martech Zone
I-Tag: ukuklanywa kwekhasi lokubamba
Izinyathelo Ezi-8 Zokwenza Amakhasi Wokufika Aphumelelayo
NgeSonto, uDisemba 6, i-2020 NgeSonto, uDisemba 6, i-2020 UStefanie Siclot
Ikhasi lokufika lingezinye zezisekelo eziyisisekelo ezizosiza ikhasimende lakho ukuthi lihambe ohambweni lomthengi walo. Kepha kuyini ngempela? Futhi okubaluleke kakhulu, lingakhulisa kanjani ibhizinisi lakho ngokukhethekile? Ukufingqa, ikhasi lokufika elisebenzayo lenzelwe ukwenza ukuthi ikhasimende elikhona lithathe isenzo. Lokhu kungaba ukubhalisela uhlu lwe-imeyili, ukubhalisela umcimbi ozayo, noma ukuthenga umkhiqizo noma insizakalo. Ngenkathi inhloso yokuqala ingahluka,
NgoMgqibelo, Juni 25, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Akungabazeki ukuthi ukwandisa amakhasi okufika kungumsebenzi ofanelekile kunoma yimuphi umthengisi. Ama-Monks e-imeyili abeke ndawonye le infographic ephelele yokuxhumana kumathiphu wokusebenzisa amakhasi okufika aqhuba imiphumela elinganisekayo. Nazi ezinye izibalo ezinhle ezihlotshaniswa nokwenza kahle kwekhasi lokufika. UMongameli uBarrack Obama uqokelele enye imali eyizigidi ezingama- $ 60 ngosizo lokuhlolwa kwe-A / B Amakhasi okufika amade anekhono lokukhiqiza ukuhola okungafika ku-220% ngaphezulu kokuphindwe kabili kokubizelwa esenzweni okungama-48%
Amaphutha we-Landing Page Okufanele Uwagweme
NgoLwesibili, ngoJuni 16, i-2015 NgoLwesibili, ngoJuni 30, i-2015 Douglas Karr
Ungamangala ukuthi zingaki izinto eziphazamisa umuntu ekhasini abafika kulo. Izinkinobho, ukuzulazula, izithombe, amaphuzu ezinhlamvu, amagama agqamile… konke kudonsa ukunakekelwa kwesivakashi. Ngenkathi lokho kuyinzuzo uma wenza ikhasi ulungiselela futhi uhlela ngamabomu lezo zivakashi ezizolandelwa, ukungeza into engalungile noma izinto ezingaphandle kungasusa isivakashi ekubizelweni esenzweni ofuna bachofoze kuso futhi uguqule